अनुहारको चमक बढाउने यी हुन् सजिलो उपाय - Sakaratmak Soch
अनुहारलाई कसरी आकर्षक बनाउने ? अनुहारमा कसरी चमक ल्याउने ? कसरी नरम बनाउने ? अक्सर धेरैको मनमा उब्जने प्रश्न हो यो । हुन पनि झट्ट हेर्दा देखिने भाग हो, अनुहार । अनुहारको सौन्दर्य नै फिका छ भने त्यसले समग्र व्यक्तित्व ओझेल बनाइदिन्छ । अहिलेको जमानामा व्यक्तित्वको पनि उत्तिकै महत्व छ । व्यक्तित्वले नै दोस्रो व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ ।
वास्तवमा अनुहारमा निखार ल्याउनका लागि खानपानदेखि उचित हेरचाहसम्म आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ्य खानपान, अनुशासित दिनचर्या, सरसफाईले अनुहारमा चमक ल्याउन सकिन्छ । त्यतीमात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक हुनुपर्छ । मनमा पिडा, कुष्ठा, घृणा जस्ता विकार छ भने, अनुहारको चमक फिका देखिन्छ । त्यसैले स्वस्थ्य जीवनशैलीसँगै मानसिक सुखले पनि सौन्दर्यमा अहंम भूमिका खेल्छ । अब सामान्य काइदातर्फ लागौं । अनुहारमा चमक ल्याउन स्वस्थ्य जीवनशैली अपरिहार्य हुन्छ । यसमा खानपानको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । कतिपय यस्ता खानेकुरा हुन्छ, जो सौन्दर्यका लागि हितकर मानिन्छ ।